Nnetwerɛ (Articles) - Ama Kambon
All Twi Uncategorized
Adetwerɔ “Skhmkht Ea on Love Sublime” na ɛkasa fa ɔdɔ ho nsɛm a ɛwɔ Kemetman mu ho. Wɔ Kemetman mu, mmaa ne mmarima taa twerɔ anwonsɛm faa ɔdɔ a ɔɔmo wɔ ma wɔn ho no ho. Saa anwonsɛm taa wɔ nsɛmfua nson. Ɔɔmo taa twerɔ faa sɛdeɛ ɔɔmo wɔ “yareɛ” a ɔɔmo nte apɔ kɔsi […]
Adetwerɔ a yɛfrɛ no: “Haiti, Morocco and the AU: A Case Study on Black Pan-Africanism vs. anti-Black continentalism” na ɛkasa afa sɛdeɛ nsonsoneɛ wɔ hɔ wɔ deɛ yɛfrɛ no “All-Africanism” ne “Pan-Africanism” ntam. Berɛ a yɛka sɛ “All-Africanism” ɛkyerɛ sɛ yɛpɛ sɛ Arabfoɔ a wɔ to hyɛ yɛn so ka deɛ ɛsɛ sɛ ɛyɛ Abibiman […]
Fiada a ɛtwaa mu no, yɛkɔɔ KASI. KASI yɛ baabi a nnipa tumi soɛ, a ɛwɔ baabi a yɛfrɛ no Lati-Wote. Nnansa yi ara na yɛasi KASI awie. Berɛ a yɛkɔɔ hɔ no, mesua faa asa ne nnwom a ɛwɔ hɔ no. Na ɛyɛ anika. Afei nso mepɛ sɛdeɛ a wɔde nnɔteɛ ade si adan […]
Bantufoɔ na wɔbɛn Umzansi hɔ. Wɔwɔ abakɔsɛm bebree. Baako na ɛfa sɛdeɛ nnipa baa wiase. Wɔkaa sɛ, ɔbosom bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no Ninavanhu-Ma. Na ne ho yɛ fɛfɛ yie. Deɛ ɔdi ne so hene na ɔde Sunsum Krɔnkrɔn. Ninavanhu-Ma na ɔde wiase baeɛ, ɛna ne kunu, a ɔyɛ ɔbosom a ɔde Nkwa Dua, […]
Ɛnnɛ mesua faa nnwom bi ho. Nnwom no na ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛdwene nea yɛbɛyɛ ama yɛn nkyirimma a wɔbɛnya ho mfasoɔ daakye ɛfiri sɛ wɔ nnwom yi mu, obi te sɛ akwakoraa a wɔnyini bebree na ɔdwene ne nkwadaa ne nkyirimma ho na ɔduaa kube. Nti ɛsɛ sɛ yɛn na yɛdwene nea yɛbɛyɛ […]
Yɛhwɛɛ ananse ne wɔn ntentan ho nsɛm. Ananse ntentan na ɛtumi boa ananse ayɛ nneɛma pii. Wɔ sene wɔn ntentan na ɛkyɛ dɔnhwere baako. Wɔyɛ anadwo biara. Wɔde kye mmoawa afoforɔ. Ntentan akɛseɛ akɛseɛ no tumi kye nnomaa nketewa. Ananse bi na wɔn nkyerekyere ntentan da. Wɔkɔ ananse afoforɔ hɔ na wɔwe wɔn. Ananse nketewa […]
Nnora yɛsuaa afa mmoa a wɔte nsuo ase. Yɛsuaa afa nsuomnam a wɔn mu bebree wɔ hɔ na deɛ wɔwe nsuomnam na wɔba nkabom sɛ wɔwe wɔn nyinaa, te sɛ nnomaa a wɔdware asuo, bonsu, ne nsuomnam akɛseɛ akɛseɛ. Afei yɛsuaa afa gyata ho. Berɛ a osuo na ɛba bɛtɔ no, mframa bɔ na obobiri […]
Meresua afa mmoa ho ɛne baabi a wɔretena. Wɔ abibiman mu, yɛwɔ mmoa bebree te sɛ gyata, obibiri, ɔsebɔpɔn ne ɛsono. Nnipa na ɔsono ɛse de yɛ nnuro, enti wɔn mu bebree na wɔawu. Wɔkunkum bɛnkoroɔ bebree nso. Wɔ baabi ara, te sɛ aburokyire anafoɔ anaa atifi, deɛ wɔte hɔ renkunkum mmoa na bebree ase […]
Bragorɔ yɛ Akanfoɔ ayankomadeɛ a yɛyɛ berɛ a mmaa reyɛ aduru ne mpanimfeɛ so. Da a wɔyɛ bragorɔ no, wɔsɔre anɔpatututu na wɔ to nnwom. Abusua ne nnamfo ba na mmaa mpanimfoɔ a wɔagoro wɔn bra dada na wɔboa abaayewa no yi ne ho nwi, abubu ne mmɔwerɛ. Wɔde no kɔdware asiesie no kama. Wɔwie […]
Ɛnnɛ, mesuaa afa nkwadaa a wɔn awofoɔ tɔn wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛnya sika ade abɔ wɔn abrabɔ. Nanso ɔɔmo ayɛ wɔn ayakayakadeɛ. Wɔma wɔn yɛ adwumaden ayi mpataa kosi berɛ a wɔnyini. Nanso obi wɔ hɔ a wɔboa wɔn na ɔɔmo san kɔ wɔn awofoɔ. Wɔfa nkwadaa no na ɔɔmo boa wɔn anyini ama […]